Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahaday wanaajinta xiriirkooda | Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahaday wanaajinta xiriirkooda | Hal Sheegaha La Hubo
Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahaday wanaajinta xiriirkooda
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Turkiga ayaa kala hadlay dowladda Turkiga sidii loo wanaajin lahaa xiriirka labada dal ee sii xumaanayay bilihii la soo dhaafay.
Labada dal ayaa waxaa soo kala dhex khilaaf kadib markii dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay taageereyso ururada Kurdiyiinta sidii loogaga sifeyn lahaa deegaanada ku dhow dhow xadka wadanka Turkiga uu la leeyahay wadanka Siiriya.
Sidoo kale, Mareykanka ayaa illaa iyo hada diidan inuu Turkiga u gacan geliyo wadaadka mucaaridka ee Futtellah Gulen oo magangelyo ku heysta dalka Maraykanka.
Turkiga ayaa bishii lasoo dhaafay bilaabay hawlgal militari oo balaaran, waxayna ciidamada Turkiga gudaha u galeen Waqooyiga dalka Siiriya dhulka Kurdida ka dagaalamayaan iyagoo la wareegay dhawr magaalo.
Ciidamada Turkiga iyo kuwa Kurdida oo ay wehliyaan ciidamada Maraykanka ayaa isku horfadhiya magaalada Manjib ee bariga gobalka Afrin ee waqooyiga Siiriya.
Militariga Turkiga ayaa ugu baaqay Maraykanka inuu ciidamadiisa kala baxo magaalada Manjib, Maraykanka ayaa sheegay hadii la weeraro ciidamadooda gacanta siinaya Kurdida inay iyaguna jawaab adag ka bixin doonaan.
Taliyaha Ciidamada Marykanka ee Siiriya iyo Ciraaq, Paul Funk ayaa sheegay in Maraykanka isdifaaci doono hadii lasoo weeraro ciidamadooda iyo Kuwa kurdida.
M/weynaha Turkiga Erdogan ayaa isaguna sheegay inuu ku dhufan doono “…Dharbaaxadii Cismaaniyiinta…” ciidamadaasi ku sugan magaalada Manjib ee Mareykanka, taasi oo micnaheydu tahay inuu duulaan ku qaadi doono.
Dowladda Turkiga ayaa ku eedaysay Mareykanka inuu hub culus u daabulayo maleeshiyaadka Kurdida hubkaasi oo khatar ku noqon kara amniga dalkooda, eedeyntaasi oo uu Maraykanka beeniyey.
Tillerson ayaa la ogeyn inuu ku guuleysan doono safarkiisan diblumaasiyadeed oo laba maalin qaadan doona, isagoo sheegay inuu doonayo in la hagaajiyo xiriirka labada dal ee saaxiibada ah.